yeinotevera mashiripiti hunyengeri, pixel nharembozha dziri kuita kuti maapponi emifananidzo anyangarike
Kuru Nhau & Ongororo Kune anotevera mashiripiti hunyengeri, Pixel nharembozha dziri kuita kuti maapponi emifananidzo anyangarike
Kune anotevera mashiripiti hunyengeri, Pixel nharembozha dziri kuita kuti maapponi emifananidzo anyangarike
Sekureva kweReddit poster (kuburikidza 9to5Google ) chigumbuso chitsva chiri kukanganisa mamwe mafoni eGoogle Pixel anomhanyisa Android 10. Mushure mekuisa chigaro cheDecember Android chengetedzo, maapplication eapps anga achingo nyangarika kubva kuPixel Launcher achisiya zita reapp pachiratidziri. Asi sezvo pasina zita rinoshandiswa kune iwo mashanu maapplication muFavorites tray, zviratidzo zvisipo ipapo zvinosiya nzvimbo isina chinhu zvachose. Kungoti icon yaenda hazvireve kuti iyo app yabviswa; Kubaya pane isina chinhu kucharamba kuvhura iyo app yakasarudzwa.
Iyo bhaggi haigone kudzokororwa uye iyo icon yeapp inokanganiswa kazhinji ndeyeimwe yemapurogiramu ekupedzisira akavhurwa nemushandisi. Zvichemo zvakatumirwa nevanhu vakatamba Pixel 2 XL, Pixel 3a uye ese maPixel 4 mamodheru. Tinogona kuzivisa kuti iyi bug haina kutapudza yedu Pixel 2 XL inomhanya Android 10 pamwe naZvita chengetedzo yekuvandudza yakaiswa.
Kana mapikicha ako ePixel ari kufadza ruoko rwako, ungangoda kumisazve iyo Launcher yePixel nekupukuta iyo data kubva pairi. Enda kuZvirongwa>Zvirongwa & Notices>App info. Bhura pasi pasi kuPixel Launcher uye tora pairi. Iwe wosarudzaKuchengetedza & cache>Bvisa chengetedzo. Kana zvidhori zvisipo zvadzoka, iwe & apos; zvakanaka kuenda. Kana zvisiri, iwe uchafanirwa kuvimba neGoogle kuburitsa kunze kwekuvandudza. Panguva ino, zvinokwanisika kuti kambani haina kana kuziva nezvenyaya iyi ichifunga kuti yanga isiri dambudziko rakapararira.
Zviratidzo zveApp zviri kutsakatika kubva kuPixel Launcher
Mumwe weRedditors ane dambudziko iri akagovana vhidhiyo inoratidza iyo bug iri kuita . Kana yako Pixel iri kuita uye ichiita kuti mifananidzo inyangarike, unogona kubata Google nekuenda kuZvirongwa>Matipi & rutsigirouye sarudza Runhare kana Chat.
Unotanga kurega, kuvhura kana kuteedzera mota yako? Kune maapplication eaya (Ford vs Honda vs Chevrolet)
Iyo Samsung Galaxy-yakasarudzika Fortnite CHIVA ganda rave kuwanikwa kurodha pasi
Verizon vs Xfinity: mapurani efoni, mitengo uye mafoni kuenzanisa
Mashandisiro aungaita AirDrop pane yako iPhone nePad kuti ugovane mafoto, mavhidhiyo, kutaurirana, uye zvinongedzo